17. Hawl iyo Shaqo: Waxaan maqlay weriyeyaasha qaarkood oo oranaaya: “Hebel oo dal hebel ku maqnaa ayaa maanta ka soo noqday; isaga oo muddo bil ah halkaas hawlo shaqo ugu maqnaa!”. Maalin kalena waxaan maqlay wartebiye Xamar ka soo hadlaaya, kana warramaaya hoogga iyo ba’a ay weriyeyashu Soomaaliya ku qabaan. Markaas buu yiri: “Toddobaadkii aynu soo dhaafnay oo keliya waxaa Xamar lagu diley 3 weriye; iyaga oo hawlahoodii shaqo gudanaaya.”
Laba saddex jeer kolkaan weedhaas maqlay ayaan ogaadey inuu yahay gef hor leh oo dhowaan afka lagu soo kordhiyey; gef , weliba, aad u muuqda oo si fudud loo dareemi karo. Waa gef 20 sano ka hor qofkii ku tiraaba ay bulshadu ku qoonsan lahayd, ha yeeshee faca maanta joogaa aanay isdareensiin, qalabka warfaafintana aan cidi kula yaabin. Halkee baa, haddaba, uu gefku weedha kaga jiraa?. Jawaabtu waxay tahay: Wuxuu kaga jiraa israacinta labada eray ee kala ah hawl iyo shaqo, kuwaas oo, iyada oo aan waxba loo dhexaysiinnin, ay labada weriye adeegsadeen.
Waxay la mid tahay adiga oo yiraahda: ‘Berri ‘Boosaaso Bandar-Qaasin’ ayaan u sodcaali doonaa?’ Ama adiga oo yiraahda: ‘Dad badan ayaa ‘duumo dhaxan’ sannad walba qaaradda Afrika ugu le’da’. Ama adiga oo yiraahda: ‘Hebel waa nin muran akeekan badan’. Erayada Boosaaso iyo Bandar-Qaasim waa laba magac oo isla magaalo keliya loogu yeero, haddii aad midkood ku sheegtona midka kale sheegistiisa baahi loo qabaa ma jirto. Duumo iyo dhaxan iyana waa laba magac oo isla cudur qura loo yaqaan, waana cudurka qaniinyada kaneecada qaarkeed laga qaado. Haddii, kolka, aad labada mid ahaan adeegsatana midka kale adeegsigiisu waa hadaltiro. Sidaas oo kale, ‘hebel waa muran badan yahay’ inaad tiraahdo waa hadal la yaqaan, ‘waa akeekan miiran’ inaad tiraahdaana waa wax iyadana la garan karo. Ha yeeshee, waxa aan la garan karin oo innaba aan wax soo kordhinayni waa inaad labada eray israaciso, dabadeedna aad tiraahdo ‘hebel waa nin muran akeekan badan’.
Waxaa, kolka, habboonaan lahayd labada magac inta la kala xiriir-furo in midka hore tilmaan la raaciyo, lana yiraahdo: “Hebel oo dal hebel ku maqnaa ayaa maanta ka soo noqday; isaga oo muddo bil ah halkaas hawlo dawladeed ugu maqnaa!”. Ama in la yiraahdo: ‘Toddobaadkii aynu soo dhaafnay oo kleliya waxaa Xamar lagu diley 3 weriye; iyaga oo hawlahoodii warfaafineed gudanaaya’. Ama in la yiraahdo: ‘Raggii ay shalay maxkamaddu xukunkooda ku dhawaaqday waxaa ku jirey qaar inta xarig dheer lagu xukumay, haddana shaqo adag loogu daray’.
Maalin kale ayaan haddana waxaan maqlay weriyeyaasha midkood oo leh: “Dawladda Turkigu waxay qiratay inay shalay guluf dagaal ku qaadday waqooyiga dalka Ciraaq; halkaas oo ay ku weerartay dagaalyahannada Xisbiga Kurdiga ee Pkk lagu magacaabo”. Waxaa weedhaanna ku jira gef la mid ah kii aynu soo aragnay oo ah israacinta laba magac oo aan waxba loo dhexaysiinnin.
Magac magac kale la raaciyaa sida ay laaxin u tahay oo aanay macnaha guud waxba ugu kordhinayn ayay tilmaaan tilmaan la raaciyaana laaxin u tahay, iska daa maqlaha ama akhristaha inay garashada ujeeddada wax dheeraad ah uga iftiimisee. Intii muddo ahba waxaa Soomaalida dhexdeeda ka hirgalay oraah qalad ah, ha yeeshee aan cidina dhaagin. Waa oraahda, ‘fiican badan’ oo Soomaali aan tiro yarayni ay hadda kaga jawaabto su’aalaha isnabdaadinta iyo iswaraysiga daarran sida: ‘Maxaad sheegtay? Iska warran? Xalay maxaad ku barideen? Carruurtii sidee kuu yihiin? Reerkii maxaad kaga war-qabtaa?’ iyo kuwa kale ee ay isku jaadka yihiin. Halkaanna waxa ay dhibaatadu ka jirtaa waa israacinta labadan eray ee kala ah fiican iyo badan oo ah laba tilmaamood, ha yeeshee aad arkayso si qalad ah in magac iyo tilmaan la isaga dhigaayo.
Laba qof oo aan is’aqooni kolkay meel isaga hor-yimaadaan, kolba koodii nabdaadinta ku hormara ayaa wuxuu oran jirey: “Nabad ma sheegtay?”. Markaas buu kan kalena wuxuu ku jawaabi jirey: “Nabad baan sheegaye, adigu maxaad sheegtay?” Kolkaas ka dib ayay is-haybsan jireen, iskana waraysan jireen mid waliba waxa uu rabo inuu wax ka ogaado iyo dantii uu ku raad-joogey: Baadixoolaad, abaar iyo aaran, roob iyo deegaan, colaad iyo nabad iyo dhammaan labada mid walba meesha ay saantiisu ka soo jeeddo wixii lagu qabey. Taasina waa markii ay arrintu joogto laba ruux oo socoto ah ama koox negi oo meel shiran ku ah iyo koox kale oo markaas la soo joogsatey.
Ha yeeshee, waxaa jirta isnabdaadin kale oo si gaar ah iyada looga garan karo dhinacyada isnabdaadinayaa waqtiga ay markaas ku sugan yihiin; ma habeen baa, ma maalin baa?. Bal tanna aan tusaaleeyo: Nin socoto ah ayaa goor ay fiid hore tahay waxa uu la soo joogsan jirey reer, wax yar ka hor, rugahoodii u soo hoydey oo xoolihii soo xeraystay oo maalay oo carruurtii seexsaday amaba ay markaas u seexanayso. Goortaas oo kalena nabdaadinta ninkaasi waxay u badnayd inay noqoto: “War maxaa lagu soo uruuray?”. Dabadeedna, odayga reerka u weyn ayaa ku jawaabi jirey: “Nabad baan ku soo ururraye, adigu maxaad sheegtay?”. Halkaas buu iswaraysiga kale ka sii socon jirey, ninkaasina reerka ayuu habeenkaas martiyi jirey ama meel kale oo uu yaqaan ayuu u sii dheelman jirey.
Isla ninkaas socotada ahi kolkuu waabberigii ku soo baxo reero kale oo xoolihii ay weli u xeraysan yihiin oo markaas haruubbada u qaatay amaba kala soo baxay waxa uu ku nabdaadin jirey: “War maxaad ku barideen?”. Ama ‘Maxaa lagu beryey?”. Ama ‘Ciddu maxay ku bariday?”. Odayga reerka ama ragga waaweyn ee uu dhalay midkood ayaa markaasna ku jawaabi irey: “Nabad baannu ku barinnay. Alxamdulillah. Wax soo aaddan Allaa og. Wax weyddiin ogaal. Warkayaa inta le’eg. Waa sidee, adigu maxaad sheegtay?”
Mararka qaarkood haddii ninkaas reerka lihi uu dayrsanaayo ee uu gocanaayo dareen dhowaan qoladooda la soo gudboonaadey (sida rag laga laayey, xoolo laga mooradduugey, dumar laga boojiyey, iwm), nabdaadinta ah ‘maxaad ku barideen?’ wuxuu kaga jawaabi jirey: “La soo kaakac. Nin iyo waagii. Madaxa la qaad! Aadane mooyee, Eebbe wax ka sheegan mayno! Ninkeed-dhibi ma yara’ iyo erayo la mid ah oo midka socotada ahi uu ka garan jirey dhacdo aan la mahadini inay reeraha ku cusub tahay.
Guud ahaan, sidaas bay muddo dheer isnabdaadinta Soomaalidu iska ahayd, waxayse wax iska beddaleen oo ay wax ku soo kordheen xilligii Gumeysiga, gaar ahaan barkii labaad ee qarnigii 20d. Qayb weyn oo bulshada Soomaaliyeed ka mid ahi waa markii ay reer-magaalowdey. Dhallinyaro door ahi waa markii waxbarashada casriga ah ay dugsiyadii shisheeyuhu furay ugu xeraysatay. Waa xilligii ay bilaabatay inay dhexdeenna ka hirgalaan hababkii isnabdaadinta ee qarammadii ina gumeystey ay ina bareen sida: Buon giorno, Buon pomeriggio, Buona sera, Good morning, Good afternoon, Good evening, iwm.
Muddo waxay sidaas ahaato oo hababkii isnabdaadinta afafka shisheeyaha lagu xarragoodaba, waxaa la soo gaarey dhammaadkii 1900 iyo afartannadii iyo bilawgii 1900 iyo kontonnadii, markaas oo xisbigii gobannimoddoonka ee Leegada (SYL) loo yiqiini uu calan-wallaynaayey. Sida laga yaabo in weli la xusuusan yahay, waddaniyad heer jidbo gaarsiisan iyo qab ummadnimo oo caqiido diineed lagu saawayn karo ayuu xisbigu beryahaas dadkii ku wada tallaalay, waxaana ujeeddooyinkii u dhignaa ka mid ahaa in afsoomaaliga la qoro, sidaasna afafka shisheeyaha looga maarmo.
Haddaba, sannadkii 1949kii ayaa magaalada Xamar iyo Leegada dhexdeeda waxaa laga unkay urur-dhaqameed la baxay, ‘Goosanka Afsoomaaliga’; kaas oo ay asaastay dhallinyaro uu, Allaha u naxariistee, hormuud u ahaa afyaqaankii la oran jirey Yaasiin Cismaan Keenadiid. Waxay ahaayeen dhallinyaro aqoonta dhaqankooda ku darsatay tii casriga ahayd ee ay ka kororsadeen dugsiyada maamulkii Talyaaniga iyo kii Ingiriiska ee dal-weynaha Soomaalida u wada taliyey intii u dhexaysey 1941-1950kii. Waxay ahaayeen qaar uu derderey jacayl aan soohdin lahayn oo ay u qabeen afsoomaaligooda; kaas oo ay u arkayeen eray iyo oraahba, inuu aad hodon uga yahay, sidaas darteedna aanu u baahnayn afaf qalaad erayo looga soo amaahdo. Markaas bay aad isugu hawleen eray kasta oo afafka shisheeyaha ku abtirsada, Soomaaliduna ay ku hadasho inay ku beddalaan ku’ la mid ah oo, asal ahaan, af-Soomaali ah.
Xilligaas ayay dhallinyaradaasi waxay Soomaalidii reer-magaalka ahayd ka reebeen ku-adeegsiga isnabdaadintii afafka shisheeyaha uga timid, dhowaantana ay qaayibeen. Waa xilligii ay soo saareen weedhaha ay ka midka yihiin : ‘Subax wanaagsan’, ‘galab wanaagsan’, ‘habeen wanaagsan’ iyo ‘maalin wanaagsan’, kuwaas oo haddiiba bulshada dhexdeeda ka hirgalaya, lagagana maarmay: Good morning, Good afternoon, Good night, Buon giorno, Buona sera, Buon pomeriggio iyo weedhaha qalaad ee la midka ah.
19. Oddoros: Saraakiisha Jamciyadda Quruumaha ayaa markii ay muddo joogaanba ka soo dega garoonka No. 50, si ay u oddorasaan habka ay kaalmadu dadka u baahan ay u gaareyso.
20. Qardajeex: Mar dhawr bilood haatan laga joogo ayaa meel Boosaaso u dhow waxaa lagu af-duubay weriye Faransiis ah oo hay’addii warfaafineed ee uu u shaqaynaayey xagga masawir-qaadidda ugu qaybsanaa. Wuxuu doonaayey, isaga oo maamulka dhulka Punt aan ogeysiin inuu gaaro xeebta Mareero la yiraahdo; halkaasna uu kala soo laabto masawirro uu ka soo qaado dadka Yaman doolka ugu sodcaala ee doonyaha halakaysan inta la iga ijaaro badda tarabtarabta ugu le’da. Masawirradaasi waxay noqon lahayeen kuwii ugu horreeyey oo dadkaas geerida u bareeray ay dunidu abid ka aragto, weriyuhuna, hadday u suuraggasho, intay magac dheeriyi ka raacdo ayuu haddana ku dallici lahaa!
Dabadeed, madaxda geyigaas nin ka mid ah oo ka jawaabaya su’aal ay idaacadaha qaarkood weyddiiyeen ayaa yiri: “Weriyaha Faransiiska ah ee halkaas lagu af-duubay wuxuu ahaa nin qardajeex ku socda”. In kastoo uu dedaaley, haddana ninkaas madaxda ahi kuma uu guuleysan macnihii uu rabey erayga ku habboon inuu afka uga helo. Ulajeeddadiisu waxay ahayd weriyaha la afduubay inuu taxaddar li’i ku canbaareeyo. Wuxuu doonaayey inuu ku eedeeyo waxa ku dhacay iyo burcadda uu u gacan-galay inuu isagu isu geystey, markii madaxda dhulka Punt uu sodcaaalkiisa kala tashan waayey oo bedbaadadiisa uu iyaga ugu magan noqon waayey. Markaas buu adeegsadey erayga qardajeex oo tilmaamaya falkii uu weryuhu ku kacay mid ka fudud.
Maxaa, haddaba, qardjeex la yiraahdaa? Waa laba eray oo wadajir ahaantooda loogu tilmaamo ku-sodcaalka dhulka ay geedaha badani ka baxaan ee aan waddooyinka lahaayeen. Waxaa la yiraahdaa: “Roobab mahiigaan ah oo waddada gooyey dartood, baabuur badan ayaa saaka magaalada qardajeec ku soo gashay”. Waxaa kaloo la yiraahdaa: “Ma og tahay hebel intuu jidkii xalay ka habaabay inuu soo qardajeexay, dabadeedna uu yimid, isaga oo ay qodxo ka meel-waayeen.”
U malayn maayo, kolka, falka weriyuhu qardajeex uun haddii uu ku ekaan lahaa in wargeyskii uu u shaqaynaayey, dawladda Fransiiska ee uu u dhashay iyo Midowga Yurubba ay bedbaadada naftiisa uga welweli lahaayeen sidii xoogga lahayd ee ay uga welweleen dhawrkii maalmood ee uu gacanta burcadda ku jirey. Weriyuhu isaga oo og dhulka uu marayo inaan kala-dambayn sidaas ahi ka jirin ayuu haddana u bareeray inuu keligiis sodcaalo. Sow isagu kuma dhiirran maamulka gobolka intuu iska indho-tiro in keligiis cad oo madow uu Mareero isa sii taago; isaga oo og inay keli-safriddaas halisi uga imaan karayso, halka uu u socdaana aysan ahayn xeeb ku-bedbaadiddeeda la hubo oo lagu masayn karo xeebaha koonfurta dalka Faransiiska ee Cote d’azur loo yaqaan!
Haddaba, falka weriyaha shisheeye lagu eedeeyey qardajeex lama yiraahdee, wuu ka weyn yahay. Waa jar-iska-xoornimo ama waa qar-iska-tuurnimo. Sidaas awgeed ninkii madaxda ahaa ee waraysiga bixinaayey waxaa ku habboonayd inuu ku jawaabo: “Weriyaha Faransiisku wuxuu ahaa nin jar-ika-xoor ah, haddii kale qar-iska-tuur ah.”
22. Kaalin libaax leh
B. Erayo shisheeye oo aan baahi loo qabin: kuwa Soomaaliyeed maxaa lagu nacayaa?
Soomaaalidu, sidaynu wada og nahay, waa ummad wax-akhriska iyo qoraalkuba ay ku cusub yihiin. Sidaas darteed, waa ummad idaacadaha aad u dhegeysata oo jecel waxa dunida ka dhacaaya inay ku maqasho afka ay garanayso oo keeda ah. Markaan anigu hanaqaaday, dhallinyaro iyo waayeelba, wararka uu weriyuhu tebinaayo ka sokow, afsoomaaliga uu ku hadlaayo ayaa loo fiirsan jirey.
Taas darteed, waxaynu weriyaha ku tilmaami karaynaa, shalay iyo maantaba, toos iyo gurracba, bare ay dhegeysatadu afka ka bartaan oo, dhinaca waxabarashada guud, bulshada aad uga saameeya. Malaha, waa sababta inoo fasiraysa weynida xilka daryeelka afsoomaaliga ee weriyeyaasha maanta dusha ka saaran; xilkaas oo ay ka soo dhalaaleen warfidiyeennadii wax ka soo tebin jirey idaacadaha afsoomaaliga ku hadla sannadihii konotonnadii, lixdannadii iyo toddobaatannadii qarnigii hore iyo, guud ahaanba, wixii qorista afka ka horreeyey.
Afka oo aan qornayn iyo ka dibba, waa raggii ku guuleystey, war iyo warbixinba, dhegeysatadooda inay ugu gudbiyaan afsoomaali barax la’. Waa ragga lagu xusuusan doono aqoontii qabku weheliyey ee ay u lahaayeen dhaqankooda iyo afkooda. Waa ragga ay tahay inaynu ku maamuusno sidii ay afsoomaaliga u kobciyeen ee ay uga dhigeen af qaadi karaya fikradaha casriga ah iyo eraybixinta afafka qalaad ee sayniska, teknoloojiyada iyo kasmooyinka bulshada.
7. hirarka gaaggaaban (short waves )
13. buuraleyda Goolan (Golan heights)
… iyo qaar kale oo dharaar noolba aynu ka maqalno idaacadaha Afsoomaaliga ku
Waana loo qaadan karaa. Runtii, weriyeyaasha da’dii hore waxaa i xusuusiyey dhallinyarada dhowaanta warfaafinta ku soo biirtay oo qaar ka mid ah aan ku darraabaayo sida ay uga liitaan afsoomaaliga tayada sare leh ee idaacadaha u qalma iyo, isla markaas, sida ay u moog yihiin, afsoomaaliguna, tabta afafka kale, inuu barasho uga baahan yahay.
Haddaba, taag iyo aqooni meel ay dhigtoba, xilka daryeelka afsomaaliga intiisa ugu weyni, maalin kaleba yeelkeede, waxa uu maanta dusha ka saaran yahay qolyaha warfaafinta, gaar ahaan idaacadaha iyo warfidiyeennada ka xoogsada ee wararka iyo warbixinnadaba ka dawiya. Taas aniga oo maanka ku haya, bal aan tusaaleeyo gefafka dhegeysiga idaacadaha qaarkood aan ka qabtay oo warfidiyeenka xilligan aan farta ugu fiiqaayo, si aynu u ilaalinno bedqabka tiirarka dhaqankeennu ku qotomo midka ugu qaalisan; waa afsoomaaligee. Gefafkaas oo aan ka yaabaayo, haddii aan daymo loo yeelan, inay sidaas ku hirgelaan ayay ila noqotay inaan dadka ku baraarujiyo, in kastoo aanan hubin sida ay mudan yihiin in dhegaha loogu raaricin doono.
1. Gefaf erayada afka qaarkood ku saabsan;
2. Kuwo xagga naxwihiisa la xiriira; iyo;
3. Erayo afaf shisheeye ka soo jeeda oo dhiggooda afkeenna laga heli karo, sidaas darteedna aan adeegsigooda baahi loo qabin;
4. Tarjamad xarfi ah iyo wax-curis la’aan: Oraah inta warbaayiyaasha midkood inta maalin laga maqlay looga wada dayday; iyada oo aan afka laga waayin si kale oo loo yiraahdo.
Intaas aan ku dhaafo 10kaasi erayada ay ka midka yihiin ee warbaahinta qaarkeed ay sida qaladka ah u adeegsato, una gudbo kuwo afaf shisheeye laga keenay oo aynu maalin walba maqalno. Waa dhab oo afafka adduunku erayada way kala amaahdaan, hase ahaatee amaahashada caynkaas ah waxaa laguu oggol yahay markii ay kuwa afkaagu kugu yaraadaan. Haddaba, su’aashu waxay tahay, ‘kuweennii oo daf ah maxaynu qaar qalaad ku falaynaa?.’ Erayadaas afafka shisheeye gardarrada ay uga soo qaataanna waxaa ka mid ah:
1. Suxufi: Bartamihii 1900 iyo sagaashannadii ayuu eraygani si kediso ah dhinac walba inooga soo galay. Hotel suxufi! Suxufi Xamar jooga! Suxufi ‘wargeys hebel’ ka tirsan! Hebel ayaa meel hebla’ suxufiyiin kula hadlay! Cidina isma weyddiin: eraygu halka uu ka soo jeedo iyo mid u dhigma in aynu leennahay iyo in kale. Waa lagu qamaamay, laguna kawkabay sidii ari wax badan biyo ka qatanaa oo kaalinkii ceelka iyo isaga la isaga dhex-baxay!
Horta eraygu waa carabi, isaga oo sax ahna waxay carabtu ugu dhawaaqaan (As-Saxafi). Waxaa laga soo dhanbashay erayga asalka ah: ‘As-Saxaafah.’
Afsoomaaliga waxa uu ku yahay warbaahin amase warfaafin oo inooba ahaa magac wasaaradeed. Miyaynu illowney Wasaaraddii Warfaafinta?! Qofka ka shaqeeya amaba hawlaha warfaafinta u tababbaran, sow taynu ku magacaabi jirney warfidiyeen? Sow taynu lahayn warfidiyeenno soomaali ah? Bal maxaa lagu nacay oo ‘suxufi’ iyo ‘saxaafad’ looga doortay?
Lama yaqaan sababta ay weriyeyaashu iyaga ku jeclaysteen; iyaga oo heli kara dhiggooda oo afsoomaali ah.
Si joogto ah ayaa, haddaba, ay dadkani wararka ugu jiraan, waxayna idaacadaha qaarkood ku tilmaamaan ‘muhajiriin’; iyada oo aad mooddo inay afsoomaaliga eray uga waayeen ama inay uga helaanba aan isku dhibin.
Libaaxa ayaa ka mid ah dugaagga doolaalada lagu yaqaan ee, badanaa abaaraha dartood, kolba dalkii uu joogi jirey mid aan ahayn lagu arko. Markaas oo kale waxay oran jireen, “Libaax dool ah ayaa degmada soo galay” oo ay ula jeedaan libaax degaammo kale ka soo doolaalay amba ka soo dalandoolay.
Digaay! dalku waysku yaallaa.
Sidaas darteed, weriyeyaasheennu uma baahna erayga ‘muhaajiriin’ oo carabi ah inay dhegeyteyaasha wax ugu sheegaan. Waxaa ku habboon inay yiraahdaan, “Dal hebel dad ka soo doolay ayaa xeebaha Yurubta Galbeed shalay soo gaarey” ama “ 200 oo qof oo dool ah ayaa markab kula jabay bartamaha badyarada Cadmeed.”
3. Bareejo: Barnaamijyada cayaaraha oo lagu soo qaato tartanka kooxaha kala duwan dhex-mara waxaynu ku maqalna weriye meel wax ka soo tebinaaya oo leh, “Koox hebla’ iyo koox hebla’ cayaar kubbadda cagta ah oo magaalo hebla’ ku dhex-martay waxay ku dhammaatay bareejo; mid walibana 2 gool ayay dhalisay. Waa eray af-talyaani laga soo qaatay ‘pareggio’ oo aan weriyaha soomaaliyeed baahi u qabin, maxaa yeelay waxa uu haystaa erayo u dhigma oo sal adag afkiisa ku leh.
Wuxuu haystaa erayada ah ‘barbarro’ ama ‘barbardhac.’ Markaas ayuu ku soo warrami karaa, “Koox hebla’ iyo koox hebla’ oo xalay cayaari ku dhex-martay garoon hebel ayaa barbarro noqday. Ama waxa ay oran karaan, “cayaartii labada kooxood waxay ku idlaatay ‘barbardhac’ markii ay tu’ waliba 2 gool dhalisay.”
Labada erayba waxay ka soo jeedaan xeerarka cayaaraha bardooddanka ee, hidde ahaan, ay soomaalidu u lahayd sida legdanka, bootimaalaysiga, yoolyoolka iyo kuwa la midka ah;
4. Mr. Guuleed ama Mr. Faarax: Gobannimada ka hor soomaalidu ma lahayn talis dhexe oo dalka ka wada taliya. Ma aynu lahayn boqorro ciidammo leh oo laga baqo, amarkoodana lagu wada qasbanaa. Wiilwaal iyo qaar kale oo tiro yar markii laga reebo, boqorrada, garaaddada iyo ugaasyada soomaalidu ma lahayn awoodda wax-muquuninta ee kuwa dhiggooda ahi ay dunida kale ku lahaayeen.
Hase ahaatee, waxay sidaas ahaatoba, bartamihii toddobaatannadii qarnigii hore ayay xukuumaddii Kacaanka ee hantiwadaagga ahayd waxay malaha u baahatay eray afsoomaali ah oo u dhigma midkii ay bulshada shuuciga ahi isugu yeeri jirtey, iskuna aqoonsan jiretey; kaas oo ahaa erayga tvarish markuu Ruush yahay, comrade markuu ingiriis yahay iyo compagno markuu Talyaani yahay.
Dabadeed, maalin maalmaha ka mid ah, isaga oo Shabeellaha Hoose kormeer ku maraya ayuu madaxweyne M. Siyaad Barre wuxuu meel fagaare ah ka soo jeediyey inuu door-bidaayo erayga ‘jaalle’ in la qaato, laguna beddalo erayada shisheeye ee kala ah: Mister, Signore iyo As-Sayid oo ah kuwo afaf shisheeye laga soo amaahday, magacyada dadkana, maamuus ahaan, looga hormariyo.
Sidii ay xukuumaddaasi u burburtayba, eraygaas cidina ma soo qaadin, wax beddalyna idaacadaha kama hirgelin. Marmar ayaa la maqlaa erayga ‘mudane’ oo ah eray xilligii Kacaanka ka horreeyey lagu aqoonsan jirey raggii baarlamaanka loo soo dooran jirey. Magacyadooda ayaa laga hormarin jirey, iyaga ayuun buuna gaar u ahaa.Waxaa la oran jirey, “Mudane hebel-hebel ayaa meel hebla’ tegey” ama “sidaas iyo sidaas yiri”. Mase ahayn naanays-sharafeed rag oo idili u sinnaa.
Si kastaba ha ahaatee, weriyeyaasha qaar ka mid ah ayaa waayadan waxay adeegsadaan erayga Mister (Mr.) marka ay wararka ku xusayaan nin soomaaliyeed; magac ha lahaado ama yuusan lahaane. Waxaa, haddaba, aniga si aad ah iila qaab daran in qof afsoomaali ku hadlayaa uu yiraahdo Mr. Guuleed ama Mr. Faarax oo ah laba eray oo aan meel wada geli karin, la isna oggolaysiin karin!
‘Jaalle’ iyo ‘mudane’ haddii aan la rabinna, waxaa ila habboon, cidna damqi maysee, magaca oo sidiisa ah in la sheego;
5. Tirada telefoonka: Ma aqaan in la ila dareemay iyo in kale, waxaanse la yaabaa soomaalida xilliyadan oo, yar iyo weynba, tirda telefoonka af-ingiriis isugu sheegta. Tusaale ahaan, qof baad ku leedahay, “Telefoonkaaga ama midka hebel ii yeeri”, markaas buu inta kuu bilaabo ku oranayaa, “Qoro: eight, nine, three, five, four, six……..” ilaa uu dhammeeyo! Maxaa loo qaadan karaa?
Kolley saboolnimo xagga afsoomaaliga ah looma aanayn karo, mana aha inaan qofku afkiisa tirada ku aqoon, maxaa yeelay iyada iyo abtirsiinaduba waa aqoonta ugu horraysa ee aynu hooyada ka baranno. Maxaa u diidaya inuu yiraahdo, “siddeed, sagaal, saddex, shan, afar, lix…?”
Mar kale: maxaa loo qaadan karaa ama lagu fasiri karaa? Bal adba!;
Sida afafka kale, afsoomaaligu wuxuu leeyahay xeerar dhismaha weedhiisa xukuma. In kastoo aan dadweynaha si ballaaran loogu dhex-faafin, haddana xeerarkaasi maanta waa kuwo intooda badan la yaqaan. Iyagaas ayaa qaabeeya isrogrogga falka, qaybaha magacyada iyo sida loo kooxeeyo, qodobbada uu magac waliba qaadan karo, qurubyada iyo sida ay weedha u saameeyaan, qaybaha hadalka mid waliba meesha ay weedha ka gasho iyo wixii la hal-maala.
Haddaba, aan halkan si kooban ugu soo bandhigo qaybo ka mid ah gefafka xagga naxwaha afka ku saabsan ee warfidiyeennada qaarkood ay ku dhacaan kolka ay barnaamijyadooda dawinayaan, gaar ahaan wadaraynta magacyada iyo wixii la xiriira:
Lab ama dheddig kii ay ahaadaanba, magacyada afsoomaaligu waxay leeyihiin dhawr siyood oo loo kooxeeyo. Waxaa ka mid ah:
1) magaca oo gadaal laga raaciyo (-o) sida oday iyo odayo ama nirig iyo nirgo;
2) magaca oo gadaal laga raaciyo (-yaal) sida tuke iyo tukeyaal ama dubbe iyo dubbeyaal ama aabbe iyo aabbeyaal;
3) magaca oo gadaal laga raaciyo (-yo ) sida gabay iyo gabayo ama mindi iyo mindiyo;
4) magaca oo gadaal laga raaciyo (-oyin) sida waddo iyo waddooyin ama hooyo iyo hooyooyin;
Afartaas siyood iyo qaar kale oo aan ka boodney ayaa magacyada afsoomaaliga loo kooxeeyaa ama loo wadareeyaa. Waxaase jira habab kale oo aan afkeenna sal ku lahayn, idaacadahase aynu ka maqalno. Waxaa ka mid ah: magaca oo, si loo kooxeeyo, gadaal laga raaciyo dibkabaha (-iin); taas oo aan ku tusaalayn karayno saddexda eray ee kala ah Falastiiniyiin, mintidiin iyo dagaalyahaniin:
Falastiiniy (-iin): Habkani, sidiisaba, waa hab wax loo wadareeyo oo afka Carabta ka soo jeeda, dhowaanna ina soo galay. Waa magac loola jeedo carabta degta dalka Falastiin, waana eray kolkii afkaas lagu hadlaayo sidaas uu u qoran yahay sax ku ah, hase ahaatee khilaafsan xeerarka kooxaynta magacyada afsoomaaliga. Waxay la mid tahay innaga oo niraahna: Jarmaliinta, Hidiyiinta, Ingiriisiyiinta, Talyaaniyiinta; taas oo dhadhankeeda qaladka ah aynu si fudud ku dareemi karayno. Sidaas darteed, waxaa ila habboon ummaddaas kolkii aynu soomaalida u sheegayno inaynu ku niraahno: dadka Reer-Falastiin ama Reer-Falastiin oo keliya;
Mintid (-iin): Marka hore kani waa eray afsoomaali ah oo aan u baahnayn in habkan carabiga ah loo wadareeyo. Waxaan u jeedaa erayadu haddii ay afsoomaali yihiin waxay, sidii aan soo aragnay, leeyihiin hababkooda gaarka ah ee ay u wadaroobaan. Marka labaadna waa eray tilmaan ah oo keli iyo kooxba aan beddalmin. Waxaa la yiraahdaa, ‘nin mintid ah’ sida loo yiraahdo, ‘100 nin oo mintid ah.’ Waa tuu ninkii gabyey lahaa: Mintid faro yar mirihii bataa kama macaashaane! Sidaas darteed, waxaa gef ah in la yiraahdo, ‘ururro mintidiin ah’ ama ‘kooxaha mintidiinta ah ee dal hebel…’ Waxaa habboon oo xeerarka naxwaha afkana sal ku leh in la yiraahdo, ‘ururro mintid ah’ iyo ‘kooxaha mintidka ah ee dal hebel…’;
Dagaalyahan (-iin):: Isna waa eray afsoomaali ah oo leh qaab loo wadareeyo; kaas oo aan ahayn qaabka carabiga ah ee uu hadda u qoran yahay, warfidiyeennada qaarkoodna ay ugu tiraabaan. Wuxuu ka mid yahay magacyo, cayn ahaan, lab ah, kuna idlaada shibbaneyaasha kala ah n, l, d, r iyo b.
Magacyada sidaas ah markii ay wadar noqonayaan shaqalka (-o) ayaa gadaal ka raaca, waxaase ku dhaca isbeddal dhinaca codka ah. Shibbanaha ugu dambeeya ayaa laballaabma. Waxaa tusaale u noqon kara: sacab iyo sacabbo, gamuun iyo gamuunno, shabeel iyo shabeello, wadaad iyo wadaaddo, iwm.
Haddaba, erayga ‘dagaalyahan’ oo ku dhammaada shibbanaha ‘n’ wuxuu u wadaroobaa tabta kuwaas afarta ah, sidaas awgeedna ‘dagaalyahanno’ ayuu noqonayaa marka wax nin ka badan lagu tilmaamaayo;
5. Eedaymo: Erayga (eed) waxa uu ka mid yahay kuwo uu warfidiyeenka cusubi ku turunturroodo, gaar ahaan marka uu doono inuu wadareeyo. Waa magac dheddig oo hal-alanle ah (one-syllalbe word), isaga oo kalena waxa uu ku kooxoobaa ama uu wadar ku noqdaa marka gadaal laga raaciyo shaqalka (-o).
Aan ku tusaaleeyo, naxwe ahaan, erayadan ay isku dabeecadda yihiin: hees iyo heeso, meel iyo meelo, seed iyo seedo, seef iyo seefo, beel iyo beelo, beer iyo beero, iwm. Erayga ‘eedaymo’ oo qaarkood ay wadarta ereayga (eed) ugu adeegtaani ma wadaroobi karo, maxaa yeelay magac ma aha, naxwe ahaanna waa qalad.
Waxa uu ka soo jeedaa erayga ‘eedayn’ oo ah masdar (infinite), masdarkuna ma wadaroobo. Sidaas darteed, erayga ( eed ) marka aynu wadar ka dhigayno wuxuu noqonayaa ‘eedo’ ee ‘eedaymo’ noqon maayo. Waxaa u daliil ah tuduc ku jira gabay uu Cismaan Baxnaan tiriyey oo ahaa:
5. Qalalaasooyin, dhimashooyin iyo dilal: Saddexduba waa erayo aynu dharaar walba idaacadaha ka maqalno, lana yaabno. Naxwe ahaan, magaca Afsoomaaligu mar waa lab, marna waa dheddig, mar waa keli, marna waa koox, mar waa caadyaal, marna waa cillanaad, mar waa gaar, marna waa mid guud.
Waxay la mid yihiin run, been, doqonnimo, hantiwadaag, daacadnimo, iwm.
Erayada sidaas ahi, afsoomaaliga markii ay joogto, ma wadaroobaan. Waxaase hubaal ah weriyeyaasha soomaalidu inay arkeen erayadaas oo afafka shisheeye qaarkood qaab-wadareed ku leh, markaasna ay ku daydeen. Waxay la kulmeen erayada af-ingiriiska ah ee kala ah: ‘riots’, ‘deaths’ iyo ‘killings’, dabadeedna waxay u rogeen qalalaasooyin, dhimashooyin iyo ‘dilal!’
Haddii ay af-ingiriiska qaabkaas wadareed ku leeyihiin, afsoomaaliga kuma yeelan karaan. Sidaas daraaddeed saddexduba, tiro ahaan, waa magacyo keli ah, markii ay wax badan tilmaamayaanna waxba iskama beddalaan. Waxaad oran kartaa, “Magaalooyin dhawr ah ayaa shalay waxaa ka dhacay qalalaase xoog leh, sida lagu soo warramayna, dilka halkaas ka dhacay tiradiisa waa la yaabay, dhimashadu waa tarab-tarab oo xisaab ma laha.’;
Sidaas darteed, haddii uu yeeluhu keli yahay, falkuna waa inuu ku tiro noqdaa oo uu keli noqdaa. Tusaale: waxaad oran kartaa, “Jarmalka iyo Faransiisku waxay diideen qorshaha dagaalka ee Maraykanku uu Ciraaq ku weeraray.’ Hase ahaatee, ma oran karaysid, “Jarmalku waxay diideen qorshaha dagaalka ee Maraykanku uu Ciraaq ku weeraray.” Waxaa qumman in la yiraahdo: “Jarmalku wuxuu diidey…” kolka uu yeeluhu wadar yahay sida Jarmalka iyo Faransiiska, falkuna wuu wadaroobayaa, wuxuuna noqonayaa ‘diideen’, haddiise uu keli yahay waa inuu ‘diidey’ noqdaa.
Xeerka caynkaas ah ayay maalin walba weriyeyaasha qaarkood ka tallaabsadaan. Waxaynu maqalnaa iyaga oo leh, “Dalka Ruushku waxay sheegeen…!” ama “Jamciyadda Quruumuhu waxay yiraahdeen…!” ‘Dalka Ruushku’ waa keli, sidaas darteed falka ah ‘sheegeen’ ma uu qaadan karo. Sidoo kale, ‘Jamciyadda Quruumuhu’ iyaduna waa keli, sidaas darteed falka ah‘yiraahdeen’ ma uu qaadan karo. Waxaa, naxwe ahaan, hagaagsan in la yiraahdo, ‘Dalka Ruushku wuxuu sheegay’ iyo ‘Jamciyadda Quruumuhu waxay tiri.’ Waxaa iyaduna sax ah inaad tiraahdo, ‘Qarammada Midoobey waxay yiraahdeen…’, maxaa yeelay falku wuxuu waafaqsan yahay yeelaha oo wadar ah: ‘Qarammada Midoobey.’
7. Laba qof (-ood): Waayadan gefaf-naxweedka afsoomaaliga dhexdiisa caanka ku noqday waxaa ka mid ah wadaraynta erayga qof; taas oo ka soo horjeedda xeer la yaqaan, kuna saabsan hababka kooxaynta magcyada oo si fudud la isaga dhaadhicin karo. Magacu haddii uu dheddig yahay oo tiro laga horraysiiyo waxa uu wadar noqdaa markii (-ood) gadaal laga raaciyo sida;
1. kab ( -ta): 4 kabood
Haddiise uu magacu lab yahay, hal-alanlena yahay oo tiro laga horraysiiyo ma wadaroobo. Sida uu kelida ku yahay ayuu, markii uu hal ka batona, iska ahaadaa sida;
Inahaas ayaan ku deynayaa gefafka ugu muuqa dheer ee ku saabsan xagga macnaha erayada iyo naxwaha afsoomaaliga. Waa gefafka dharaar walba weriyeyaasha idaacadaha qaarkood aynu ka maqalno, kolka ay wararka iyo warbixinnada inoo soo tebinayaan. Siday ila tahayna, tusaaleyaashii aan soo taxay waxa ay tilmaan inaga siin karaan xaddiga ay gefafkaasi leeyihiin iyo sida, haddii aan la iska hagaajin, timaaddada afkeenna ay ugu yeelan karaan saamayn aan wanaagsanayn.
Bilawga qoraalkan sidii aan ku soo xusnay, afsoomaaligu waa af hodon ah oo, murtida ballaaran ee uu xanbaarsan yahay darteed, mudan in la ilaaliyo oo dadka ku hadlaa ay xil dheeraad ah iska saaraan. Waa af wax weyn ku kordhin kara suugaanta caalamiga ah ee lagu dhaato, waase haddii uu helo aqoonyahanno u kaca oo maansadiisa quruxda badan dunida u bandhiga. Intaba waxaa igala sii weyn, waa tiirka ugu weyn tiirarka ummadnimo ee isku haya soomaalida Geeska Afrika ay iniba meel kaga nooshahay.
Maantadan la joogo marka la isa sii kala reebo, warfidiyeenka idaacadaha ka hadla ayaa xilkaas weyn u sii aano ah. Isaga ayuu dadweynuhu maalin walba dhegeystaa. Isaga ayay dhallinyaradu ku dayataa, una haysataa dadka intiisa kale inuu afka ka badiyo. Isaga ayaa bulshada dhexdeeda erayo qaldan ka hirgelin kara, kuwo hagaagsanna dhegeysteyaasha dibnaha ugu tiri kara. Isaga ayaa macaanka afka soo bandhigi kara oo ina jeclaysiin kara, isaga ayaana ka dhigi kara wax aan dhegtu u hiloobin oo afafka kale ay ka door-biddo. Si uu, haddaba u guto, daryeelka afka xilka ka saaran, kolka horeba, waa inuu aqoonsadaa inuu leeyahay awoodda xaddigaas leh. Taasina waxay horseedaysaa inuu u fiirsado afka uu ku hadlaayo iyo tayada weedha uu tebinaayo. Waa inuu hubiyaa erayada uu adeegsanayaa inay, jirrid ahaan, afsoomaaliga sal ku leeyihiin, oraahda uu ku tiraabayaana ay u dhisan tahay hab waafaqsan xeerarka naxwe ee uu leeyahay.
1. Waa inuu garawsadaa afsoomaaligu, intiisa badan, inuu ka soo jeedo bulsho reer-miyi ah oo xoolo-raacato ah; hiddaheeda iyo afkeeduna ay isku xiran yihiin;
2. Waa inuu barasho joogto ah ugu jiraa taariikhda dhaqanka bulshada iyo macnaha erayada furaha u ah;
3. In kastoo aanu weli dhab u kala miirmin, haddana waa inuu aqoonsadaa inay jiraan af rasmi ah oo qoraalka iyo warbaahinta ku wanaagsan iyo ‘af suuq’ in xaafadaha lagaga hadlo mooyaane, aan idaacadaha iyo wargeysyada ku habboonayn. Afkaas rasmiga ahi wuu abuurmay, maantana wuu jiraa oo waa midka aynu haddaba wax ku qorno. Gefafba ha ka buuxeene, waa afka aynu ku aragno warbaahinta qoran iyo midda layska arko, isla markaasna aynu ka maqalno idaacadaha afsoomaaliga wax inoogu soo tebiya;
4. Inta aanu adeegsan waa inuu u dhabbe-galaa abtirsiimada erayada (etymology) iyo kuwa uu isku beddalan karo ee isku sida uu u adeegsan karo (synonymous);
5. Si uu carrabkiisa u soofeeyo, adeegsiga erayada habboonna uu ugu carbiyo, weriyuhu waa inuu ku dedaalaa macaansiga dhaxalka suugaaneed ee ummadda oo weliba uu kor ka qaybaa maansadii hore ee soomaalida inta ugu badan ee uu kari karo;
6. Waa inuu bartaa naxwaha afsoomaaliga oo, shisheeyeba ha u badnaadee, wax badan laga qoray laga soo bilaabo 1903dii ilaa 1999kii;
7. Sidoo kale, waa inuu wax badan ka ogaadaa eraybixintii afka ku soo korodhay tan iyo intii la qoray (1972) ilaa tii lagu soo saaray shirkii eraybixinta afsoomaaliga ee Jabbuuti ka dhacay sannadkan (Maarso – Mey 2002da);
8. Ugu dambaysta, waxaan ku talin lahaa hay’adaha ama idaacadaha kala duwan ee wararkooda afsoomaaliga ku baahiyaa inay daryeelka afka qaybtooda ka qaataan oo, markii muddo la joogoba, ay abaabulaan aqoon-isweydaarsi weriyeyaasha u shaqeeyaa ay ku kulmaan; wixii gefaf loo arkona lagu hagaajiyo 2. Birmingham (England); Nofembar, 2002 idaajaa21@hotmail.com